Home Wararka Gudaha Xildhibaan ka tirsan BF oo lagu weeraray Muqdisho –
Xildhibaan ka tirsan BF oo lagu weeraray Muqdisho –
– Warar kala duwan ayaa kasoo baxaya khasaaraha ka dhashay weerar xalay lagu qaaday hoyga xildhibaan ka tirsan baarlamaanka 11-aad ee dalka, kaas oo loo adeegsaday bam-gacmeed, sida ay xaqiijiyeen saraakiisha ammaanka.
Sida ay ogaatay radiohalgan.com xildhibaanka ayaa weerarka ka bad-baaday, balse waxa ay dhaawacyo soo gaareen qaar ka mid ah ilaaladiisa, kuwaas oo oo la geeyey goobaha caafimaadka ee magaalada Muqdisho oo haatan lagu dabiibayo xaaladdooda caafimaad.
Ilo deegaanka ah ayaa innoo sheegay in ragga weerarka qaaday ee bambada ku tuuray guriga xildhibaanka ay goobta isaga baxsadeen, inta aysan soo gaarin ciidanka amniga.
Sidoo kale waxaa meesha tegay ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka, gaar ahaan Booliska degmada Hodan oo uu horkacayey taliyaha saldhigga degmadaas, Xuseen Cad-Ceed, waxayna baaritaano ka sameeyeen Taleex, si loo soo qabto raggii geystay falkaasi.
Muddooyinkii lasoo dhaafay ayaa waxaa magaalada Muqdisho ka dhacayey falal liddi ku ah amniga, sida qaraxyo iyo dilal qorsheysan oo badankood ay sheegatay kooxda Al-Shabaab.
Si kastaba, arrimahaan oo idil ayaa kusoo aadayo, iyada oo dhinaca kale laamaha ammaanka Soomaaliya ay howlgallo ballaaran ka wadaan degmooyinka gobolka Banaadir.
Previous articleAxmed Madoobe Oo Soo Dhaweeyay Magacaabista Ra’iisul Wasaaraha Cusub
Next articleKenya iyo Soomalaiy: Dhowr jeer oo hore oo ay foodda is dareen
Munaasabadda Xuska 26-Ka June Oo Lagu Qabtay Magaalada Muqdisho Iyo Gobolada...